Izinto eziningi ezitholakala kuma-dietetics zitholakala enkulumweni eyaziwa ngokuthi "iphupho yengqondo libeletha izilo": ngezinye izikhathi alinakho ukulungiswa kwesayense ngokuphelele, kodwa kusukela ekuthumeni komunye umuntu lezi zinto zokwakha ziyaziqonda futhi zibaphoqa ukuba zilahlekelwe isisindo cishe njenge-panacea.
Phakathi kokudla okunjalo - kanye ne-brainchild kaPeter D'Adamo, izinhlinzeko zombono ozwakalayo ngokwesayensi kakhulu, ngisho nangokwemvelo, ngakho kunzima ngcweti ukubona inkinga engcolile. Umlobi ungumhlengikazi ochwepheshe, ongumhlengikazi waseMelika esizukulwaneni sesibili; ngaphansi kokudla okuthuthukisiwe, akazange aphumelele ukuletha isisekelo sezesayensi esicacile kakhulu. Ngaphansi kwethonya lale mfundiso, kwakukhona labo abafuna ukujwayelekile ukulinganisela isisindo sabo, kanye nabadlali abaqeqeshiwe, okhethwe uchungechunge olukhethekile lwemikhiqizo efana ne "AV0" evelele ezitolo zokudla ezemidlalo. Isayensi kuphela lapha akwanele - ngakho-ke, kunoma yikuphi, abagxeka abaningi ngemibono yokudla okunomsoco ngezimangalo zeqembu legazi.
Ngokwalolu mbono, iqembu legazi libeka izici ezibaluleke kakhulu ekuphileni komuntu, isibonelo, ukukhetha kwesitayela sokudla, inani lokudla elidliwe, umbuso omuhle wosuku, impendulo yokucindezeleka nezindlela zokukulwa nayo, izindlela zokuqinisa ukuzivikela.
Umbhali "uthole" isihluthulelo sokuqonda indima yeqembu legazi emisebenzini yabantu ekuziphendukeni kwesintu. Ngakho-ke, iqembu legazi le-I libhekwa njengelidala, iqembu lesibili lihlotshaniswa nokuqala kokulima, ukubonakala kweqembu lesi-III kungenxa yokuhamba kwabantu ezindaweni ezisenyakatho ngesimo esibucayi, isimo sezulu esibi kakhulu, futhi iqembu IV ngokuvamile liwumphumela wokuhlanganiswa kwamaqembu aphikisayo. Futhi lapho ukhetha imikhiqizo yokudla, ikhono lama-erythrocytes ukubopha ezintweni ezahlukene liyabalwa, okungukuthi, ukusetshenziswa kwemikhiqizo "yangaphandle" yeqembu labo legazi kubangela "ukugcoba" kwamaprotheni e-plasma anezici zegazi kanye nokugcwala komzimba nge-toxin. Futhi ukudla okunomsoco, ngokucabangela "iqembu" lakhe legazi, ngokuphambene nalokho, lihlanza umzimba futhi kancane kancane limise isisindo.
Abantu abanokuqala - abakhulu kunabo bonke - iqembu legazi (0) lingabalimi "abazingeli", ngokulandelana, badinga ukudla ikakhulu inyama yokudla. Labo abanesigaba sesibili segazi (A) bangabalimi "futhi kufanele bahambisane nokudla kwemifino. Bobabili kanye nabanye batuswa ukuba basuse ngokuphelele imikhiqizo yobisi ekudleni. Abantu abaneqembu lesithathu legazi (B) bahlukaniswa njenge "nomads" futhi "bagwetshiwe" ukwenqaba imikhiqizo ngokusekelwe okusanhlamvu, kodwa kumele badle imikhiqizo yobisi. Futhi abanikazi beqembu lesine legazi (AB), ababizwa ngokuthi "abantu abasha", okufanele bathi badle ikakhulukazi iwundlu, inyamazane, imikhiqizo yobisi evutshiwe, imifino nezithelo.
Odokotela baseRussia basalokhu bephikisana mayelana nalokhu kudla kanye nokufaneleka komthuthukisi walo, futhi kulo lonke izwe i-postulates yale ncazelo iye yaba ngokungavamile futhi yakudala ngokuthi "hhayi isayensi kodwa isayensi yeqiniso".
Ukugxeka inkolelo yokudla okunomsoco eqenjini legazi kusekelwe "esimweni somlando." Umlobi uncike ekufundisweni kukaLudwig Hirtzfelda, okubheka ukuthi imvelaphi ehlangene yazo zonke izinhlangano zegazi - futhi yena ngokwakhe ugxekwa ngokuqinile ngabasosayensi abaningi. Ukwenqaba le mbono kubhidliza isisekelo lapho kusetshenzwa khona ukudla. Futhi ngubani ongasho ngokuqiniseka ukuthi abazingeli abazange bahlanganyele ekuzingeleni kanye nokuzingela, futhi bengadli ukudla kokudla kwemifino? Futhi abalimi abafanayo babengenakukwazi ukuhlanganisa ukukhiqizwa kwezitshalo ngokuzaliswa kwemfuyo, futhi eminyakeni ehambayo futhi babuyele ekuzingeleni? Izimangalo mayelana nokusetshenziswa kokudla okufanayo kuphela abanikazi beqembu elilodwa legazi azikwazi kakhulu.
Ukuba nemfundo yezokwelapha, u-D'Adamo wayephoqelekile ukuba azi umhlangano wokuhlukanisa ngamaqembu amane egazi. Kungani engacabangi i-Rh factor? Ngaphandle kwama-Rhesus antigens, kusekhona ama-antigen e-weak "ama-erythrocyte", futhi amaningi ama-antigens we-leukocyte, izicubu kanye ne-plasma - ngokucatshangelwa, manje ungabalwa ngamaqembu egazi angu-40 (i-Duffy, Kell, Kidd, i-MNSs), kodwa umbhali ucabange kuphela ikhono ukubopha amangqamuzana egazi abomvu kwezinye izinto.
Amaprotheni avela kokudla angena egazini hhayi ngesimo sawo sangempela, kodwa ahlukaniswe ngama-amino acid - kukhona cishe amakhulu amabili. Ukwakhiwa kwamaprotheni ahlukile, kodwa akukho "amathegi" kuma-molecule angenakuguquguquka, okuvela kuhlobo luni lwamaprotheni atholakala - ubisi, imifino noma inyama.
Yiqiniso, i-D'Adamo kamuva yashintsha igama elithi "amino acid" nge "lectins," kodwa isihloko sabo siyinkimbinkimbi nakakhulu: lawa "amaprotheni okubona i-hydrocarbon" kubalulekile ekuqapheliseni i-genetic code, futhi indima yama-lectin esitokisini ayichazwe ngokugcwele kuze kube yilolu suku. Ukubamba iqhaza kwabo kuphela ekuqaphelweni kwezicubu ngabanye ngamaseli kuyaziwa, okubalulekile emsebenzini wamahomoni. Futhi amanye ama-lectin abangela ukuhlukunyezwa kwe-erythrocyte kumuntu ngezindlela ezahlukene, kuye ngokuthi iqembu legazi. Kodwa ukuxhuma leli qiniso ngokudla kwakudingekile ukuzama namanje - ukubalwa kwenziwa emigameni yesayense, lapho umuntu ovamile emgwaqweni akakwazanga ukuzwakala. Ngakho isayensi yashintshwa ngisho nasayensi yezinganekwane ...
Iqiniso lokuthi isimo semvelo yonke, ngakho-ke futhi ukuvinjelwa okuhlukahlukene ekudleni, kulahlekile akuhlanganiswa nje kuphela neqembu legazi. Ngokubeka ukudla komuntu othize, odokotela baqhuba isifundo sezindaweni zomphakathi nezengqondo kanye nokuhlaziywa okuhlukahlukene nokuhlola ukuthola imbangela yalesi sifo.
Ezalelwa e-United States, inkolelo ka-ADAMO iyahlolwa kakhulu lapho, futhi izifundo zenze ukuthi "ngempela, amaphesenti athile wabanikazi beqembu elilodwa legazi abonisa ukuhlanganyela kokudla okuthile. Le phesenti ayikho enkulu kakhulu futhi ayinikezi izizathu zeziphetho ezingenakuqhathaniswa. Ukusebenzisa ukudla kweqembu legazi noma akunalo nhlobo nhlobo, noma kunika umphumela wesikhashana. " Izakhamuzi zithatha le ndlela ukuba zingabi nalutho olunzulu lwesayensi.
Ukukhethwa kwemikhiqizo yokudla okusekelwe eqenjini legazi kubangele kuholela ekuphazamiseni okuhlukahlukene nokunciphisa imvelo ngezingxenye ezithile - amavithamini, amaminerali, izakhi zokulandelela - kumuntu othize. Kusobala ukuthi ukulahlwa okuphelele kwemikhiqizo yobisi kuyothuthukisa ukulahlekelwa kwe-calcium futhi kungaholela ekutheni i-osteoporosis, ukwenqatshwa kwenyama kuyodala i-anemia ngenxa yokuntuleka kwensimbi, njll.
Abahluphekile ngokweqile ukukhipha amakhilogremu engeziwe base bekulungele ukukholelwa noma yikuphi okulandayo futhi baya noma ubani onika indlela esheshayo yokunciphisa isisindo. Lokhu kuvame ukusetshenziselwa abathengi abazama ukuthola abantu abathobekile. Endleleni yokuhweba kule nkinga, akukho lutho olungenacala - akekho oye wakhansela imali. Kodwa isifiso sabachwepheshe bezinsizi ukuthengisa abantu ngemali yabo, izindlela nezingabazeki ezingabazeki zingabangela ukuzwakalisa.
Uju: izakhiwo eziwusizo
Indlela entsha yokudla okunempilo
Okuhlwabusayo futhi okuwusizo ngamaholide
Zuza kanye nokulimala kwe-ghee
Ungaziphilisa kanjani uthando olungathandeki?
Indlela yokufundisa ingane ukuba ilale yedwa?
Mayelana nalokho ongakhuluma nomuntu?
Yini ongayigqoka owesifazane onyakeni omusha
Ugogo nomama lapho benakekela ingane
Utamatisi ekheniwe nge-rosemary no-garlic
Ungazifaka kanjani wena ngokwakho
Ukunakekela ekhaya isikhumba senkinga
Oatmeal Ukudliwa Ukudla
Ukuzivocavoca izinsana ezineminyaka engama-8 kuya ku-16: ukwelula emuva, emahlombe kanye nezingalo
Indlela yokukhetha udayisi obunjani bekhwalithi
Yini okufanele uyinake ngaphambi kokuba ushiye ukuze uhlale uphilile